पोखरामा १४ वर्षीया अबिबाहित बालिकाले बच्चा जन्माएपछि दिएको बयानले प्रहरी नै चकित मात्र नभै तीन छक्क…हेर्नुहोस् ।
October 14, 2020 October 14, 2020 adminLeaveaComment on पोखरामा १४ वर्षीया अबिबाहित बालिकाले बच्चा जन्माएपछि दिएको बयानले प्रहरी नै चकित मात्र नभै तीन छक्क…हेर्नुहोस् ।
गण्डकी: पेट दुख्यो भनेपछि बाबुआमाले १४ वर्षकी छोरीलाई अस्पताल पु¥र्‍याए । चिकि’त्सकले परीक्षण गर्ने क्रममा उनी गर्भ’वती भएर बच्चा जन्माउने अवस्थामा पुगेको भनेपछि अभिभावक छाँगाबाट खसेजस्तै भए । बा’लिकाले अस्पतालमै शि’शु जन्माइन् ।
बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, बा’लिकालाई गर्भवती बनाउने अरू कोही नभएर आफ्नै काका (२१ वर्ष) रहेछन् । सर्लाहीको उक्त परिवार पोखरामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएको थियो ।
दाजु–भाउजूकोमा बस्न आएका ती युवाले भतिजीलाई क’र’णी गरेको खुलेको हो । बा’लिका कहिलेकाहीं विद्यालय जाने गरे पनि प्रायः बाबुआमासँगै मजदुरी गर्थिन् ।
प्रहरी’का अनुसार गत मंसिरको पहिलो साता ती युवा पोखरा आएका थिए । पुस २ को राति साढे ९ बजेतिर कोठामा कोही नभएको मौका छोपेर काकाले भतिजीलाई क’र’णी गरेको खुलेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुवास हमालले बताए । ‘करिब एक महिना बसेर काका सर्लाही नै फ’र्किएछन् ।
बा’लिकाले आफूमाथि भएको घटनाबारे कसैलाई पनि भनिनछिन् । बाबुआमाले पनि थाहा पाएनछन्,’ उनले भने, ‘बा’लिकाको पेट बढेको खासै वास्ता नभएको र यसलाई लिएर कुनै शंका गर्ने कुरा पनि नभएको अभिभावकले बताएका छन् ।’
भदौ २८ मा बा’लिका पोखराकै एक अस्पतालमा सामान्य सु’त्केरी भएकी थिइन् । बच्चा जन्मिएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भएको हो । पी’डित परिवारले गत भदौ २९ मा कास्की प्रह’रीमा कानून अुनसार उ’जुरी दिएको छ ।
आ’रोपित युवालाई कास्की प्रहरीले सर्लाही प्रहरीको समन्वयमा आइतबार प’क्राउ गरेर ल्याएको छ ।
उनलाई कानून अनुसारको क’सुरमा जिल्ला अदाल’तबाट सोमबार ५ दिनको म्याद थप गरी अनु’सन्धान भइरहेको हमालले बताए । मुलुकी अ’पराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा ३ ‘ग’ अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेर समूहकी बा’लिकामाथी क’र’णी भ’एमा १२ देखि १४ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ ।
हा’ड’ना’ताभि’त्र क’र’णी ग’र्नेलाई थप ३ देखि ६ वर्षसम्मको कैद हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरले बताए । बा’लिका र शिशुलाई पोखराकै एक संरक्षण केन्द्रमा राखिएको छ । दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
अब ‘गरीब क्षेत्री-बाहुनलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ’ सहमत हुनेले सेयर गरौँ !
चाडबाडको समयमा संवे`दनशील नभए पुन: लकडाउन गर्न बा`ध्य हुनेछौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली
तपाईंको जिवनमा ऋणले कहिल्यै पिछा छोड्दैन् ? यस्तो छन् छुटकारा पाउँनको निम्ति उपयोगी टिप्सहरु,पूरा पढ्नुहोस।ॐ
नक्सा सानो भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नदेखिएको हो : सूर्य थापा,,,पढेर आफ्नो बिचार राख्नु होला।
मनोकामना माइले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, कार्तिक ०८ गते शनिबार ,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ?हेर्नुहोस राशिफल पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नुहोस
“जाति,भाषा,धर्म,संस्कृति र सभ्यताहरुको,संरक्षण, नै देश विकासका,आधार,हुन प्रचण्ड”
रअ प्रमुखलाई भेटेपछि नक्साबाट लिम्पियाधुरा गायब ?’